Seces : Sasatry ny manao ramatahora -
AccueilSongandinaSeces : Sasatry ny manao ramatahora
Seces : Sasatry ny manao ramatahora
Naato tsy ho mpikambana ao anatin’ny Seces sampana Antananarivo intsony ny filoha nasionalin’ny Seces teo aloha, Ralambomanana Dimby sy ny mpikambana roa hafa. Ny tsy fifanarahana amin’ny fitakiana efa napetraka no antony nampiatoana azy ireo, nandritra ny fivoriambe notanterahina, ny alakamisy teo. Fanapahan-kevitra izay noraisin’ny mpikambana miisa 159 tamin’ireo 173 nanatrika ny fivoriana tao anaty latsa-bato miafina. “Nandritra ny fivoriambe ny Seces sampana Antananarivo dia naato tsy ho mpikambana intsony ny filoha teo aloha, Ralambomanana Dimby sy ny mpikambana roa hafa, Rivoharison Randrianasolo sy Randrianomana Bruno mandra-pisian’ny fanapahan-kevitra mifanohitra amin’izay”, hoy ny Pr Ravelonirina Sammy Grégoire, filoha ny Seces Antananarivo. Voalaza fa ny fahadisoana betsaka efa nataon’izy ireo, ny tsy fiarovana ny zon’ny mpiasa sy ny mpiara-miasa ary ny tsy fitsipahan-doha ny laka-nitana no antony nampiatoana azy ireo, araka ny fanazavana hatrany.
Lasa sorona ny mpianatra
Tapaka ihany koa nandritra ny fivoriambe nataon’ny Seces sampana Antananarivo, ny alakamisy teo fa tsy hamoaka valim-panadinana ny Seces raha toa ka tsy mivaly daholo ny fitakiana momba ny tambim-pikarohana ho an’ireo mpampianatra mpikaroka misotro ronono izay mbola manohy ny asany. “Mitohy ny fitakiana ary hohamafisina aza izany, manoloana ny fampiatoana ny asa fampianarana. Takiana ny tokony handoavan’ny minisitera mpiahy tambim-pikarohana ho an’ireo mpampianatra misotro ronono mbola manatanteraka ny asany, izay tokony efa naloa nanomboka ny vola janoary taona 2016. Eo ihany koa ny tokony hitazomana hatrany aloha mandra-pisian’ny “décret” vaovao misolo ilay “décret” 2005-098 ny “obligation de service” ho 125 ora mandritra ny taom-pianarana iray”, hoy hatrany ny filohan’ny Seces, Pr Ravelonirina Sammy Gregoire. Sasatry ny manao ramatahora hatrany moa ity sendikan’ny mpampianatra mpikaroka ity rehefa misy fitakiana hataony. Ny mpianatra hatrany anefa no lasa sorona amin’ny fitakiana hataony. Iza no tena tsy mandray ny andraikitra. Ny minisitry ny Fampianarana ambony sa ny Seces izay tsy mitsahatra manao ramatahora ? Raha toa ka avy amin’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony ny olana, nahoana izy no tsy mitondra vahaolana ?